RW Kheyre oo ka hadlay amni darada Muqdisho iyo Wasiirada uu soo magacaabayo | Baydhabo Online
RW Kheyre oo ka hadlay amni darada Muqdisho iyo Wasiirada uu soo magacaabayo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay amni darada ku soo korortay Muqdisho todobaadyadan oo dilal qorsheysan ay ka dhaceen.
Kheyre ayaa sheegay inuu xooga saari doono sidii uu uxaqiijin lahaa amniga Caasimada maadaama ay tahay halka ay dagantahay Dowladda loona baahneyn in dilal ay ka dhacaan.
Wasiirka Koowaad ee Xukuumada Soomaaliya ayaa tilmaamay inuu taliyayaasha ciidamada iska kaashan doonaan sidii looga hortagi lahaa falalka lidiga ku ah amniga ee mararka qaar ka dhacay degmooyinka Gobolka Banaadir.
Waxa uu sidoo kale Kheyre ka hadlay Mushaar la’aanta ay ka cabanayaan Ciidamada dowladda, Waxa uu carabka ku dhuftay iney xuquuqdooda heli doonaan Ciidanka dowladda la’aanteedna aaney waxba la fari karin askarta iney qabtaan.
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda ayuu sidoo kale ka hadlay isagoona ka codsaday in dhalinyarada ka barbar dagaalanta Al-Shabaab ay joojiyaan dilalka ayna ku soo biiraan dowladda si ay uhelaan Nolol wanaagsan iyo Waxbarasho.
Kheyre ayaa ugu dambeyntiina wax laga weydiiyay Xukuumadiisa cusub ee uu soo dhisi doono iyo iney kujiri doonaan Golaha Sharci dajinta ee Baarlamaanka.